Xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ee dawladda Federaalka oo taageeray galitaanka ciimada Kenya ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ee dawladda Federaalka oo taageeray galitaanka ciimada Kenya ee Soomaaliya.
Muqdisho, Oct, 27 – Shir ay maanta (Khamiis) ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaano 100 ku dhaw oo ka soo jeeda beesha daarood ayey ku soo dhaweeyeen soo galitaanka ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya, shirkaas oo ugu dambayntiina laga soo saaray war-saxaafadeed ka kooban dhawr qodob.
Prof: C/risaaq Cismaan ?Jurile? oo ka mid ahaa xildhibaanadaasi ayaa saxaafadda u sheegay inay tahay in dalka laga qabto ururka Al-shabaab ayna soo dhawaynayaan cid kasta oo la dagaalamaysa ururkaasi oo ay dawladda Kenya ku jirto.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale loogu mahadceliyey dawladaha ciidamadu ka joogaan dalka dalka Soomaaliya ee Uganda, Burundi iyo Kenya, sidoo kale xildhibaanada ayaa ka codsaday dawladaha daneeya arrimaha Soomaliya inay gacan ka geystaan sidii maamul waxtar ah loogu samayn lahaa gobollada Jubbooyinka marka Shabaabka laga kiciyo.
Mas?uuliyiinta Soomaalida ayaa si weyn ugu kale aragti duwan soo galitaanka ciidamada Kenya ee dalka Soomaliya, waxaana arrintaasi si weyn u soo dhaweeyey Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole halka M/weynaha iyo R/wasaaraha dawladda Federaalkuna ay ku tilmaameen mid khaladan oo aan la qaadan Karin.
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in sababta ciidamadeedu ay u galeen dalka Soomaaliya ay tahay inay la dagaalameen ururka Al-shabaab, waxayna M/weyne Shariif ku eedeeyeen suurta galnimada inuu Shabaabka raacsanyahay.